CELEBRITY Archives - Page 8 of 8 - Alinnpya
ဇနီးဟောင်းမေသန်းနု လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ နေထိုင်ဖို့ အိမ်တစ်အိမ်ငှားပေးပြီး အစစအရာရာ လိုလေသေးမရှိ စီစဉ်ထားတဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်
May 2, 2020 AlinnPya Comments Off on ဇနီးဟောင်းမေသန်းနု လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ နေထိုင်ဖို့ အိမ်တစ်အိမ်ငှားပေးပြီး အစစအရာရာ လိုလေသေးမရှိ စီစဉ်ထားတဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီး အကယ်ဒမီများရှင် မေသန်းနုကတော့ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုကြောင့် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ် ချမှတ်ခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေသန်းနုအတွက် ခင်ပွန်းဟောင်း စင်ရော်မောင်မောင်နဲ့ သားဖြစ်သူ မင်းသန့်မောင်မောင်တို့ကတော့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း မေသန်းနုအတွက် ခင်ပွန်းဟောင်း ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်က အိမ်တစ်အိမ်ငှားပေးပြီး အစစအရာရာ စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြထားပါတယ်။ “အင်းစိန်တောရစခန်းတွင် တရားဆောက်တည်နေသော ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မေသန်းနု ပြန်ထွက်လာချိန်တွင် နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် မေလ (၁)ရက်နေ့မှ […]
ဖြူဖြူကျော်သိန်းသီချင်းကို PERFORMANCE ကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုပြပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပေါက်ပေါက်ကျော်သိန်းပါလို့ ခံယူလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်
April 30, 2020 AlinnPya Comments Off on ဖြူဖြူကျော်သိန်းသီချင်းကို PERFORMANCE ကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုပြပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပေါက်ပေါက်ကျော်သိန်းပါလို့ ခံယူလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်
ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်ကတော့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောကထဲမှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ရပ်တည်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖို့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မစိမ်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက်က လက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကို ရပ်နားထားပြီး အိမ်မှာပဲ အချိန်ကုန်ဆုံးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက်က အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေ ရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် ဖန်တီးပေးတတ်သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ကိုပေါက်က အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ “ဒါအချစ်တဲ့လား” သီချင်းကို ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဟန်ပန်အမူအယာအတိုင်း သီချင်းဆိုပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကိုပေါက်က […]
April 27, 2020 AlinnPya Comments Off on ချစ်သူကိုအလင်းပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်
တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲလေးပါပဲနော်…. သက်ဆုံးတိုင် ပေါက်ဖက်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ ချစ်သူကိုအလင်းပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲလေးပါပဲနော်…. သက်ဆုံးတိုင် ပေါက်ဖက်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ ချစ်သူကိုအလင်းပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲလေးပါပဲနော်…. သက်ဆုံးတိုင် ပေါက်ဖက်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ ချစ်သူကိုအလင်းပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲလေးပါပဲနော်…. သက်ဆုံးတိုင် ပေါက်ဖက်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ ခ်စ္သူကိုအလင္းျပလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာျမဝတ္ရည္ တကယ္လိုက္ဖက္တဲ့ စံုတြဲေလးပါပဲေနာ္…. သက္ဆံုးတိုင္ ေပါက္ဖက္ရပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္…။ ခ်စ္သူကိုအလင္းျပလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာျမဝတ္ရည္ […]
ကူဖီးလ်.. သူ့ကို သိကြလား
April 26, 2020 AlinnPya Comments Off on ကူဖီးလ်.. သူ့ကို သိကြလား
Photo – Kid Artist Aakriti Sharma […]
ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကို အိမ်မှာပဲနေပြီး သူတို့ကိုကူညီကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချော ဆရာဝန်မလေး ပိုးမမှီသာ
April 25, 2020 AlinnPya Comments Off on ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကို အိမ်မှာပဲနေပြီး သူတို့ကိုကူညီကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချော ဆရာဝန်မလေး ပိုးမမှီသာ
ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အနုပညာကို ခုံမင်မြတ်နိုးတဲ့ တတ်သစ်စမင်းသမီးချောလေးပိုးမမှီသာကတော့ အဆိုတော် စိုင်းစိုငိးခမ်းလှိုင်ရဲ့ “သိင်္ခါရသီချင်းတစ်ပုဒ် သီချင်းလေးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာကနေ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး ယောက်ျားလေး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံခြင်းသာမကပဲ အပြစ်ဆိုဖွယ်ရာမရှိလောက်အောင် အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး နှစ်သက်မှုတွေကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပါ။ တတ်သစ်စမင်းသမီးချောလေး ပိုးမမှီသာကတော့ လတ်တလောမှာ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့အတူတူ သရုပ်ဆာင်ထားတဲ့ “ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို […]
တစ္ကိုယ္လုံးမွာ ဆံပင္ကအသက္မို႔ သိန္း(၁ဝဝ) ေပးေတာင္ မေရာင္းပါဘူးဆိုတဲ့
April 23, 2020 AlinnPya Comments Off on တစ္ကိုယ္လုံးမွာ ဆံပင္ကအသက္မို႔ သိန္း(၁ဝဝ) ေပးေတာင္ မေရာင္းပါဘူးဆိုတဲ့
ရောင်းမလား ခဏခဏ လာမမေးပါနဲ့..တဲ့.. တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဆံပင်ကအသက်မို့ သိန်း(၁ဝဝ) ပေးတောင် မရောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ မိုးကုတ်သူ မြန်မာမလေး။ ေရာင္းမလား ခဏခဏ လာမေမးပါနဲ႔..တဲ့.. တစ္ကိုယ္လုံးမွာ ဆံပင္ကအသက္မို႔ သိန္း(၁ဝဝ) ေပးေတာင္ မေရာင္းပါဘူးဆိုတဲ့ မိုးကုတ္သူ ျမန္မာမေလး။
ကိုဗစ် ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုပြောပြလာတဲ့ ဦးကျော်သူ
April 20, 2020 AlinnPya Comments Off on ကိုဗစ် ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုပြောပြလာတဲ့ ဦးကျော်သူ
နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပရဟိတ မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူကတော့ ကိုဗစ် ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့် ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေးကို “အော်… တရားဖြုတ်လိုက်ချိန်မှာ မဆီမဆိုင် တွေးမိပါရဲ့။ အော်… ကိုဗစ်19ဂယက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဖုံးလွှမ်းနေချိန်မှာ တောင်တောင်အီအီတွေးမိပါရဲ့။ နှုတ်ခမ်းနီ (Lip Stick) ဈေးကွက်တော့ ပျက်ပါပြီလို့စ် ။” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဦးကျော်သူကတော့ တရားမှတ်နေတာဖြုတ်လိုက်ချိန်မှာပဲ ကိုဗစ် ရောဂါကပ်ဘေးကြီး ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့် တောင်တောင်အီအီလျှောက်တွေးနေမိပါတယ်။ ကိုဗစ် ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းထဲမှာ နှာခေါင်းစည်း […]
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရတဲ့အထဲ ဇနီးဖြစ်သူ မေသန်းနုမပါတာကြောင့် ခံစားချက်လေးတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဇင်ယော်မောင်မောင်
April 17, 2020 AlinnPya Comments Off on လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရတဲ့အထဲ ဇနီးဖြစ်သူ မေသန်းနုမပါတာကြောင့် ခံစားချက်လေးတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဇင်ယော်မောင်မောင်
အွန် လိုင်း ပေါ်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီး မေသန်းနုရဲ့ ငွေကြေးလိမ်လည်မှု နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ သတင်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြားသိပြီးကြပြီ ထင်ပါတယ်နော်..။ မေသန်းနုကတော့ ငွေကြေး လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရပြီး ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် ကျခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇင်ယော်မောင်မောင်က အယူခံဝင်ခဲ့ပေမယ့် ကျရှုံးခဲ့ပါတယ်..။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၁၇)ရက်နေ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ တော့ ဇင်ယော်မောင်မောင် က ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် […]